နှစ် ၁၃ဝ သက်တမ်းရှိ ရန်ကုန်မိလ္လာစနစ် ပြောင်းလဲမည်၊ ရေဆိုးသန့်စင်စက်ရုံများ တိုးချဲ့တည်ဆော - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၁-ရန်ကုန် မြို့၏နှစ်ပေါင်း ၁၃ဝ သက်တမ်းရှိ မိလ္လာစနစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ရန် မာ စတာပလန်ရေးဆွဲပြီးဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင် စိုးကပြောကြားသည်။
နိုဝင်ဘာ ၁ ရက် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အ စည်းအဝေးတွင် ကျောက်တံတား မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ် ကြည်ပြာ၏”မြို့တွင်းခြောက် မြို့နယ်ရှိ လက်ခံမိလ္လာကန်များ ဆယ်ယူရာတွင် အသုံးပြုနေသော ဝန်ထမ်းများအစား ခေတ်မီစက် များဖြင့် အစားထိုးအသုံးပြုရန် အ စီအစဉ်ရှိ/ မရှိ မိလ္လာစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစီစဉ်ဆောင်ရွက် နေသည့်အစီအမံများရှိပါက သိလို ကြောင်း”မေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်က အထက်ပါ အတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”အခုချိန်မှာတော့ တိုးတက် လာတဲ့လူဦးရေနဲ့အညီ ရေဆိုးစွန့် ပစ်မှုစနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဂျိုက် ကာအဖွဲ့အစည်းနဲ့လည်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ မာစတာ ပလန်ဆွဲနေပါတယ်။ လျာထားတဲ့ အပိုင်းက ၂ဝ၂၄ အထိတိုးတက် လာမယ့်လူဦးရေအတွက် လျာ ထားပြီးတော့ ဂျိုက်ကာနဲ့ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပြီး ရေဆိုးသန့်စင်စက် ရုံနဲ့ရေဆိုးပိုက်တွေကို ဇုန်အလိုက် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် မာစတာ ပလန်ကိုတော့ရေးစွဲပြီးပါပြီ။ ရန်ကုန် မြို့အတွက် ဇုန် ၁၃ ဇုန် ခွဲခြားပြီး တော့ ခြောက်ဇုန်ကို ၂ဝ၄ဝ မှာ မြို့တွင်းမြို့နယ်တွေအတွက် လိုအပ် တဲ့ရေဆိုးပိုက်တွေကို လမ်းမကြီး နဲ့ နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေမှာ အသစ်ချထားဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ ရေ ဆိုးသန့်စင်စက်ရုံတွေ တိုးချဲ့ခြင်း တို့ကို ပထမဦးစားပေးဆောင်ရွက် ဖို့လျာထားပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝန်က ပြောသည်။
ရန်ကုန် Downtown ခြောက်မြို့နယ်၏ မိလ္လာစွန့်ပစ် သည့်စနစ်ကို ၁၈၈၈ ခုနှစ်က တည်းကစတင်ခဲ့ပြီး မိလ္လြာ>ွပန်စနစ် မှာမြေဆွဲအားသုံးမိလ္လာပိုက်များ၊ လေဖိအားသုံးမိလ္လြာ>ွပန်မကြီးများ၊ မိလ္လာတွန်းစက်အိုး ၃၅ လုံးနှင့် လေမှုတ်စက်နှစ်လုံးကိုအသုံးပြု ပြီး ရေဆိုးသန့်စင်ရေးစက်ရုံတွင်သန့်စင်ပြီး အရည်ကြည်များကို မြစ် တွင်းစွန့်ပစ်သည့်စနစ်ဖြစ်ကြောင်း မိလ္လြာ>ွပန်စနစ်မှာမူလကလူဦးရေ လေးသောင်းအတွက် ရည်ရွယ် ပြီး တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ¤င်းကပြောသည်။
”ရန်ကုန်မြိုီ့သတည အသတည ခြောက်မြို့နယ်အတွင်းမှာလည်း ရေဆိုးသယ်ပိုက်တွေကို လမ်းမ ကြီးကနေ နောက်ဖေးလမ်းကြား တွေအသစ်တည်ဖို့အတွက် နောက် ရေဆိုးသန့်စင်စက်ရုံလည်း တိုးချဲ့ တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း အသေးစိတ်စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ ဂျပန် နိုင်ငံ ဆူမီတိုမိုကုမ္ပဏီနဲ့ သြ့ကို ၂ဝ၁၇ ဇူလိုင်၂၆ ရက်က ရေးထိုး ခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ငန်းများကို ဆော လျင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လည်း ကြိုးစားနေပါတယ်”ဟု ဦးမောင် မောင်စိုးကပြောသည်။
Downtown ခြောက်မြို့ နယ်အတွင်းရှိ နောက်ဖေးလမ်း ကြားပေါင်း ၁၇၅ ခု၊ မိလ္လာတွန်း စက် ၃၅ ခု၊ မိလ္လာကန် ၂၁၁၄ ကန်နှင့် မိလ္လာပိုက်လိုင်းအရှည် ၁၅၇ဝဝဝ ပေခန့်ကို နှစ်စဉ်လူ အားဖြင့်လမ်းရှင်းခြင်း၊ အနည် ဆယ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဘဏ္ဍာငွေရရှိ မှုအပေါ်မူတည်ပြီး ဦးစားပေး အဆင့်လိုက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ¤င်းကပြောသည်။
”ကျွန်မတို့မြို့တွင်း ခြောက် မြို့နယ်အတွင်းက မိလ္လာကန်စနစ် ဟာဆိုရင် လူဦးရေလေးသောင်း လောက်အတွက် ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့ မိလ္လာစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးက တည်းကသုံးခဲ့တြဲ့>ွပန်စနစ်ဖြစ်တဲ့ အတွက် ယနေ့အချိန်ထိမြို့နယ် ခြောက်မြို့နယ်မှာ မိလ္လာဆယ်မယ် ဆိုရင် မိလ္လာလူဝင်ကျွင်းလို့ခေါ်တဲ့ ကျွင်းတွေထဲကို လူတွေကိုယ်တိုင် ဝင်ဆယ်တာတွေ့ရပါတယ်”ဟု ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဒေါ်ကြည်ပြာကပြောသည်။
တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကိုယ်တိုင်ဘတ်ဂျက်ဆွဲ၊ စိစစ်၊ တည်ဆောက်၊ အရည်အသွေးစစ်နေသမျှ ဘယ်?
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပိုက်ကျော်ခြင်းအဖွဲ့ချုပ် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ မြန်မာပိုက်ကျော်ခြင်းအဖွဲ
ကလေးဒေသ၌ နေကြာ ရိတ်သိမ်းချိန် လုပ်သား ရှားပါးမှုနှင့်အတူ မိုး အဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှုများကြော??
မန္တလေးမြို့ကို Safe City အဖြစ် ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် မြို့နယ်သုံးခုတွင် အာရုံခံစနစ်ပါ CCTV ကင်မရာများ တ
ပရီးမီးယာလိဂ်တွင် နည်းပြလုပ်ရန် အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်ဟု ဇီဒန်းကို အာစင်ဝင်းဂါး တိုက်တွန်း ?
ပြိုင်ဘက်အပေါ် မူတည်ပြီး ဂွါဒီယိုလာ နည်းဗျူဟာပြောင်းလေ့ရှိဟု၊ ဘာနာဒိုဆို ချန်ပီယံဆုအတွက် ??